Hutano Huri nani hwevanhu Vakaremara - Karman Healthcare
World Health Organisation yakaburitsa iri nyore kuverenga infographic. Iyi infographic inotsanangura kudiwa kwehutano hwakanaka kune vanhu vakaremara. It yakakosha kucherechedza nzira dzakasiyana siyana idzo avo vane disablites vanogona kugamuchira rubatsiro. Sezvakataurwa, 70 mamirioni vanhu vanoda a wiricheya, zvisinei, chete 5-15% yevanhu vanovawana. Kana iwe uchida a wiricheya, zvakakosha kuti ubate yako inishuwarenzi kuti uone kuti ungawana sei imwe. Kana iwe uine kuremara, zvakakosha kuti iwe ugoonekwa nguva dzose nedzidziso dzako uye uone kuti unobatwa zvakaenzana.
Unogona kuzvitarisa pane iyi link iripazasi.
Multiple Sclerosis Nhungamiro